Zụta ndị ọrụ, Shilọ ọrụ mbupu, Ọrụ onwe gị - Yunis
Anyị nwere ndị na-eweta ngwaahịa ogologo oge na kwụsiri ike nke ọtụtụ puku ụlọ ọrụ na iri puku kwuru puku nke ụlọ ahịa iji hụ na mbubata na ngwa ahịa ị zụtara nke ọma.
N'ime ihe karịrị afọ 10 anyị na azụmaahịa ahụ, anyị azụlitewo mmekọrịta chiri anya na ndị na-ebubata ngwaahịa kachasị mma na china .Anyị nwere ike ịnye gị ọnụahịa kachasị asọmpi n'ahịa, site na mma kachasị mma.
AKW .KWỌ AKIREKỌ
Anyị ga-enye gị ọrụ ahaziri iche, naanị otu na-egbo mkpa gị ma chọta ngwaahịa na-emezu ihe ịchọrọ ma na-eri oke arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ onye ọrụ gị ka ọ rụọ ọrụ azụmahịa ọhụrụ gị ma mepụta oghere ohuru na ike dị omimi maka ika gị, anyị ga-emezi usoro kachasị gị mma.
Anyị nwere ike ime karịa ka i siri chee, ị gaghị akwa ụta na nhọrọ gị
Jobber weputara akuko banyere ugbua…
TORONTO- (Azụmahịa WERE) –Jobber, onye na-eweta ngwanrọ na-ahụ maka njikwa ọrụ ụlọ, kwupụtara nchoputa sitere na akụkọ ọhụrụ ya lekwasịrị anya na mmetụta akụ na ụba COVID-19 na ngalaba Homelọ Ọrụ. Utili ...
Onweghi ihe dị ka ịdọgide n’ọkụ dị nso n’ọkụ na-ekpo ọkụ, blanket ndị dị larịị na ohiri isi n’ụbọchị oyi. Dịka anyị na-akpakọ oge maka oge ezumike, anyị nwere ike inye ekele maka ụwa niile ...
Ọmụmụ Azụmaahịa Ego zuru ụwa ọnụ na 2020 ka…
Nkwupụta Azụmaahịa Ego Globalwa zuru ụwa ọnụ na-enye nyocha zuru oke ma nwee ọgụgụ isi nke asọmpi, nkewa, ike na mbubata ala na atụmanya ụlọ ọrụ ga-aga n'ihu ruo 2026. Nnyocha nyocha ahụ bụ p ...
lee ozi niile
E guzobere Yunis International Trade (HK) Co., Ltd. na 2011. Ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ikike mbubata na mbupụ nke gọọmentị steeti ahụ na-akwado ahia azụmaahịa na akụ na ụba na njikwa izugbe nke kọstọm. Companylọ ọrụ ahụ nwere ntọala akụ na ụba siri ike, netwọkụ mmekọrịta siri ike, yana ndị ọrụ zuru ezu. Site na ntinye aka China na WTO, nnabata na mbupụ na-abawanye. Iji mezoo mkpa ndị ahịa na ndị na-ebubata ya na ndị na-ebubata ya na mbubata…